DhammaSong Videos - Page 2
ပါရမီတော် ဝင်းဦး တင်တင်မြ
ပါရမီတော် ဝင်းဦး တင်တင်မြ Courtesy of Sein Win recording
by Admin Added6years ago 712 Views /0Likes
myanmar song , စိုးစန္ဒာထွန်း
ဘဝသံသရာ Samsara Of Life ရေး မန္တလေး ဦးဘသိန်း၊ ဆို ဦးသုခ
In Burmese the song named "Bawa Thanthayar" by Mandalay U Ba Thein; sung by U Thukha in his Movie "Bawa Thanthayar" in 1956. It was famous according to Buddhist concept.
ဘုံဆောင်မြင့် _ စောင်းဦးမြင့်မောင်
ဘုံဆောင် (ဘုံဆောင်မြင့်၊ စိန်ကြောင်ဖလ်ရှိန်၊ ညီးလို့လင်းလင်း) ၂။ (ကြွားကြွား မိုးဖျား၊ သီခေါင်လေ၊ ရီမှောင်လေ၊ ဝေးရရှင်းရှင်း) ၂။ (ကိုးမျက်မြွှာငယ်လေ၊ စိုးစကြာငယ်လေ၊ လောက လောင်းမင်း) ၂။ (ဘုန်းတေဇာ ငယ်လေ၊ နှုန်းနေဖြာတယ်လေ၊ ထွန်းပ ဝင်းဝင်း) ၂။ (ရေနန်းဗိမာန် င
by Admin Added6years ago 633 Views / 1 Likes
ဦးထွန်းရွှေ - mp3 တေးသီချင်းကို စကားဝါမြေမှရရှိပါတယ်ရှင်။
by Admin Added6years ago 701 Views /0Likes
by Admin Added6years ago 520 Views /0Likes
by Admin Added6years ago 670 Views /2Likes
၀င်းဝင်းအောင် ( မြို့မ )
လာဘ်မိုး စည်းစိမ် တထိန်ထိန်
by Admin Added6years ago 600 Views / 1 Likes